CB Bank ရဲ့ ပညာရေး အသက်အာမခံ | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
CB Bank ရဲ့ ပညာရေး အသက်အာမခံ
CB Bank ရဲ့ ပညာရေး အသက်အာမခံ ဆိုသည်မှာ အာမခံသက်တမ်းအတွင်း မိခင် (သို့) ဖခင် သေဆုံးခြင်း၊ ထာ၀စဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းများကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ သားသမီးများအတွက် ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်ဘွဲ့ရသည်အထိ အကာအကွယ် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပေါ်လစီသက်တမ်း - ၉ နှစ် (သို့) ၁၁ နှစ် (သို့) ၁၄ နှစ် (မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။)
ပရီမီယံသက်တမ်း - ၅ နှစ် (သို့) ၇ နှစ် (သို့) ၁၀ နှစ်
အာမခံထားငွေ - ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် အထိ
အာမခံထားသူ၏ အသက် - ၁၈ နှစ် မှ ၅၆ နှစ်အထိ
သားသမီးများ ပညာရေးစရိတ်များအတွက် အထောက်အပံ့ ရရှိနိုင်ခြင်း
ပရီမီယံပေးသွင်းမှု ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနိုင်ခြင်း*
အခွန်အခမှ သက်သာခွင့် ရရှိစေနိုင်ခြင်း
ပရီမီယံကင်းလွတ်ခွင့် ဆိုသည်မှာ ပရီမီယံပေးသွင်းရမည့် ကာလအတွင်း ပေါ်လစီရှင် သေဆုံး (သို့) ထာ၀စဉ်လုံး၀မသန်စွမ်းဖြစ်ပါက ပေါ်လစီသက်တမ်းအတွက် ပရီမီယံပေးသွင်းရန် မလိုတော့သည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဆိုလိုပါသည်။
ပညာရေးအသက်အာမခံပေါ်လစီဝယ်ယူအပြီး ၁နှစ်ကျော်အကြာတွင် ပေါ်လစီရှင်တွင် အကယ်၍ အကြောင်း တစ်စုံ တစ်ရာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင် မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသနည်း။?
အဘယ်ကြောင့် ပညာသင်ကြားရေး အကျိုးခံစားခွင့်ကို တစ်ကြိမ်တည်း မထုတ်ပေးရပါသနည်း။?
ဥပမာ - အာမခံထားငွေ - ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
အာမခံသက်တမ်း - ၁၁ နှစ်
ပရီမီယံပေးရမည့်သက်တမ်း - ၇ နှစ်
ပညာသင်ကြားရေးအကျိုးခံစားခွင့် - ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၇ နှစ်
ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၈ နှစ်
ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၉ နှစ်
ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၁၀ နှစ်
ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀(အာမခံထားငွေ၏၂၀%) ပေါ်လစီသက်တမ်း ၁၁ နှစ်
Latest Post News Read 1119 times